BTS အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် နာမည်ကြီးကျော်ကြားတဲ့ Jimin ဟာ မကြာသေးခင်ကမှ Livestream ပြုလုပ်ရင်း ARMY တွေနဲ့အတူ မွေးနေ့ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုပြောနေရင်း camera ရှေ့မှာ အယောက်ချင်း စကားပြောရတာဟာ သူ့အတွက် အနေခက်တဲ့အကြောင်းလေးပါ ချစ်စဖွယ် ထည့်ပြောခဲ့ပါတယ်။
Jimin အတွက် ဒီခံစားချက်လေးဟာ ဟိုးအရင်ကတည်းက ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Jimin က “အတိတ်ကို ပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ ဘာလို့ခံစားနေရပါလိမ့်? အခုထိ camera နဲ့ အသားမကျသေးပါ့လား။ အရင်ကတည်းက ရိုက်ကူးရေးတွေလုပ်ရင်တောင် behind-the-scenes ဗီဒီယိုတွေအတွက် လိုက်ရိုက်တဲ့ ကင်မရာတွေရှိတယ်လေ။
အဲ့တုန်းက ယုံကြည်ချက်မရှိတော့ ကင်မရာရှေ့မှာဆိုရင် သန်မာချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ ကင်မရာရှေ့ရောက်ရမှာ အဆင်ပြေနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့လေ ကျွန်တော်အဆင်မပြေကြောင်းကို ဘာလို့များ အမှန်အတိုင်း ထုတ်မပြောနိုင်ခဲ့တာပါလိမ့်? အနေခက်လိုက်တာ, လို့ ပြောခဲ့သင့်တာကို ဘာလို့များ ဟန်ဆောင်ခဲ့မိပါလိမ့်နော်?” ဆိုပြီး ARMY တွေရှေ့မှာပဲ ရင်ဖွင့်သွားခဲ့ပါတယ်။
Jimin လေးက ကင်မရာရှေ့မှာ အနေခက်တာမျိုးကို လူမသိအောင်ဖုံးကွယ်ရင်း တစ်ယောက်တည်း ကျိတ်ခံစားခဲ့ပုံပါပဲ။ BTS အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူရှိနေရင်တော့ သွက်လက်နေတတ်တဲ့ Jimin ဟာ တစ်ယောက်တည်းဆိုရင်တော့ အတွေးများပြီး ငြိမ်ငြိမ်လေးဖြစ်သွားတတ်ပြန်ပါတယ်။ တကယ်ကတော့ Jimin မှာလည်း ARMY တွေကို ထုတ်မပြဖူးတဲ့ ရင်တွင်းခံစားချက်လေးတွေတော့ ရှိနေဦးမယ်ထင်ပါတယ်။
Next ၁၀ နှစ်ကြာတွဲခဲ့ပြီးနောက် မိသားစုဘဝတည်ဆောက်ဖို့ သဘောတူပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်တဲ့ Pancake »
Previous « တူ၊တူမ​လေး​တွေကို သည်းသည်းလှုပ်ချစ်ကြတဲ့ ဦး​လေး​တွေအဖြစ် လူသိများတဲ့ K-Pop Idol (၈) ဦး